I-Zorro Rojo, iNdlu entle kunye nenoxolo ngaselwandle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAurora
UAurora unezimvo eziyi-40 zezinye iindawo.
Ime kwidolophu ethe cwaka elunxwemeni yaseLas Peñitas, yimizuzu nje eli-15 ukusuka eLeon Town, eli khaya liphambi kolwandle likulungele ukuphumla kwaye lonwabele iholide yaselwandle. Onke amagumbi okulala anefenitshala yesilingi kunye ne-A / C kunye negumbi lokuhlambela elikwi-suite, ngaphandle kwegumbi le-4 apho igumbi lokuhlambela likwindawo eqhelekileyo. Kukho indawo eninzi eqhelekileyo; I-patio ejikeleze ichibi elinee-hammocks ezininzi, i-rancho yebali le-2 ilungele ukujonga i-surf okanye ukutshona kwelanga, kunye neendawo zokuhlala ezi-2 ezongezelelweyo.
IZorro Rojo yindlu egqibeleleyo yeqela elikhulu labahlobo okanye usapho olujonge ukuchitha ixesha esantini. Kukho iibhari ezininzi kunye neeresityu eLas Peñitas kwaye yimizuzu emi-5 kuphela yokuqhuba ePoneloya unokufumana iindawo zokutyela ezininzi ezinentlanzi eqhotsiweyo kunye nokutya kwasekhaya. Buza i-concierge yethu ngeenkonzo zokupheka endlwini.
3.20 · Izimvo eziyi-5
Olu lunxweme olukhuselekileyo, oluzolileyo nolunobuhlobo. Zininzi iindawo zokutyela kunye nemisebenzi efana nokukhwela ihashe, ukuloba, ukusefa, kunye nokhenketho lwendalo. Nangona kunjalo, uhambo olukhawulezayo lwemizuzu eli-15 ngemoto ukuya eLeon, luzisa izinto eziluncedo ngakumbi njengethiyetha yemiboniso bhanyabhanya, iivenkile ezinkulu, iibhanki kunye neendawo zokutyela zamazwe ngamazwe kunye nemitsalane yolwakhiwo, igadi yezityalo, umsebenzi wokukhwela isanti ethandwa kakhulu kwintaba-mlilo, kunye nesiza selifa lehlabathi.
Umbuki zindwendwe ngu- Aurora
Kukho umgcini endlini.